‘प्रहरी जिवन, कथा र व्यथा’ – Hotpati Media
‘प्रहरी जिवन, कथा र व्यथा’
२७ श्रावण २०७६, सोमबार ०६:०० मा प्रकाशित (3 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
६ बर्ष भयो मैले मेरो कर्तब्यलाई अनुशासित भएर पूरा गर्न थालेको । नेपाल प्रहरीको जागिरमा कर्तब्य निभाईरहदा परिवार प्रतिको कर्तब्य चाहिँ भुलिरहेको हुन्छ । आखिर मेरो कर्तब्य घरमा पैसा पठाउनु मात्र त होईन । घरिघरी सोच्छु, म मात्र त होईन नि म जस्ता धेरै छ्न । हाकिमको बोली भुईमा खस्न नपांउदै काम गर्न तम्सिहाल्ने बानिले पनि दिक्दार लाग्न थालेको छ अचेल । न राम्रो सेवा न सुबिधा छ । महिनाको थोरै रासनले यो खिरिलो ज्यान दिनरात नभनी दौडी रहेको हुन्छ । भोक प्यास निन्द्रा डर अनि परिवार प्रतिको जिम्मेवारी । अरु त अरु शौचालय जाने फुर्सद समेत नहुने कहिलेकाहीँ त । यो बाटो मैले नै रोजेको हो तलब को लागि मात्र म यो बाटो हिंडेको पनि होईन । देशको लागि केहि गर्छु भन्ने अभिलाषाका साथ हिँडेको एउटा युवक हुँ म । हुन त अरु पनि छन म सरहका कर्मचारी जसले आफ्नो कर्तब्य र खाएको सफतलाई विर्सेर पैसाको लागि देशको अभिमान बेचे । जसको यहि अवधिमा कति घडेरी थपिए त केहि घरका तल्ला थपिए ।
२४ सै घण्टा खटिरहँदा पनि सुबिधा केही छैन, परिवार कसरी चलाउने ? न त एक्लो जिवन जिउन तलब नै पर्याप्त छ एउटा परिवार चलाउन को लागि पुग्छ । हप्ता वा महिना त कुरै छोडौँ चाड्पर्वमा समेत छुट्टी मिल्दैन यो कस्तो सेवा हो ? चाडपर्वमा आफ्नो परिवार साथीसङ्गी सङगै बसेर मिठो मसिनो खाएर रमाईलो गर्ने रहर आखिर कस्लाई नहोला र ? के हाम्रो व्यत्तीगत जिवन छैन ? के हामीलाई पनि आफ्नो परिवार र आफन्तहरुसंग खुसी साट्ने अधिकार छैन ? यो मेरो व्यक्तीगत धारण होइन, शब्द मेरो होलान् तर आवाज सबैको हो । कसैले यस्ता सबैकुरा मनभित्रै दबाएर राख्छन् त कसैले यो परिवेश अन्त्यको लागि निर्धक्क भएर आवाज उठाँउछन् ।
हामी सुरक्षाकर्मीहरु, जुन जनताको लागि भनेर दिन रात नभनी खटिराछौं उनिहरु नै क्रुर छ्न हामीसङ्ग । एउटा लौरो को भरमा रात कटाउनुको पीडा । लौरो कै भरमा बन्दुकधारिको सामना गर्नुपर्ने पिडा जोसुकै ले कहाँ बुज्न सक्छ र ? र जस्ले बुज्छ्न उनिहरु बुझपचाउछ्न । न आँफै बोल्न मिल्छ न अरु बोलिदिन्छ्न कस्तो परिबन्ध हो यो ? सबै कुरालाई गाठो पारेर मनभित्र राखी काममा गयो काम गर्दागर्दै मर्छ जोस जाँगर त्यो तनाबपुर्ण परिस्थीती देख्दा । राज्यले पनि यतिधेरै उपहास गर्छ कि हामी राज्यका कुनै अङ्ग नै हैनौ । यस्तै यस्तै अनौपचारिक बिग्रह मानसिक तनाबले हामी जस्ता धेरै प्रहरी साथिहरू प्रताडित छौं । अझै सत्ता शक्तिमा पहुँच नभएकै कारण भोग्नु पर्ने हैरानी त छँदै छ । यति हुदाहुँदै पनि “पैसा नै सर्वा्धिक होईन छोरा । यो काम त सेवाको हो, देशको लागि महत्वपुर्ण योगदान हो” जस्ता अग्रज हरुको यहि युक्तीले मनलाई हौसाई रहन्छ । तर पुण्य कमाउनकै लागि सबैको गाली सुनेर बस्दा अनि परिवार नै आफूसङ्ग असन्तुष्ट हुँदा कहिलेकाही मन पोलेर आउँछ । सायद हामीजस्तै अन्य साथिहरुको परिवारलाई पनि लाग्दो हो आस, कि आफ्नो छोरा÷छोरी सरकारी जागिरे छ, टन्न पैसा कमायर पठाँउनछन् घर । यस्तै यस्तै ।
अझ ठुला भनौँदाहरु रक्सिले मात्तिएर आउँछ्न डर देखाउन, यसरी कि म उसकै घरको धनमाल चोरेर चोक मा उभिरहेको छु । अनि म सङ्ग आत्म रक्षाका लागि एउटा सिठ्ठी हुन्छ अनि समय मध्यरात को १२ बजे । प्रहरीले दिनरात नभनि जनताको सुरक्षामा खटिएपनि उल्टै प्रहरीमाथि नै जाईलाग्न पुग्छौं हामी अनि द्वन्दग्रस्त क्षेत्रको माहोललाई कम गर्न र प्रतिरक्षाका निम्ती अश्रुग्याँस र लाठिचार्ज गर्न बाध्य हुन्छौ प्रहरी साथिहरू । जसको सुरक्षार्थ हामी दिनरात खटिरहन्छौं उसैमाथि आक्रमण गर्ने के हामीलाई रहर थियो होला र ? तर हामीलाई “प्रहरी दमन“ को उपमा भिराईन्छ । हुनसक्छ, केही खराब नैतिक चरित्र भएका र रिसले उन्मात केही प्रहरीले आक्रमक शैली प्रस्तुत गरे । तर एक(दुई जना खराब शैलिमा प्रस्तुत भए, पैसाको लागि आफ्नो कर्तव्य र निष्ठा भुले भन्दैमा त्यसको दोष सम्पुर्ण प्रहरी जगतलाई नै दिएर हामीजस्ता निर्दाेष र कर्मठ प्रहरी साथिहरूलाई प्रहरी दमन र मिलेमतोको उपमा भिराउन मिल्ला र ?
हामीजस्ता सोझासाझा र आफ्नै क्षमताले नियुक्ती भएकाहरुको त झन् विना कसुरु जागिर खाईदिने देखि सरुवा सम्मका धम्की आउँछ । कहिले मन्त्रीका मान्छेको त कहिले अरु नेता, कहिले भने आफ्नै हाकिम । धेरैजसो भइरह्न्छ यस्तो सामान्य लाग्न थालीसक्यो अचेल । यद्दपी, सबै कुराको पोकोलाई एकातिर बिसाएर । कुकुर को पनि दिन आउँछ भन्छ्न । म त मान्छे हो भन्दै कुदिरहेछु आफुलाई, मात्र धावक सुचिमा पारेर र पर्खिरहेछु त्यो दिन जुन दिन हामीजस्ता दिनरात देशको सुरक्षामा निरन्तर खटिरहने राष्ट्रसेवकहरुको प्रोत्साहन संगै कार्यसम्पादनको निश्पक्ष उच्च मुल्याङकन हुनेगरि एक ठोस निर्णय पारित हुनेछ नेपाल सरकार बाट ।
यद्दपी, सबै कुराको पोकोलाई एकातिर बिसाएर । कुकुर को पनि दिन आउँछ भन्छ्न । म त मान्छे हो भन्दै कुदाईरहेछु आफुलाई । मात्र धावक सुचिमा पारेर र पर्खिरहेछु त्यो दिन जुन दिन हामीजस्ता दिनरात देशको सुरक्षामा निरन्तर खटिरहने राष्ट्रसेवकहरुको प्रोत्साहन संगै कार्यसम्पादनको निश्पक्ष उच्च मुल्याङकन हुनेगरि एक ठोस निर्णय पारित हुनेछ नेपाल सरकार बाट ।